पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई दिल्लीमा अस्पताल भ’र्ना, कस्तो छ स्वास्थ्य अबस्था ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारपूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई दिल्लीमा अस्पताल भ’र्ना, कस्तो छ स्वास्थ्य अबस्था ?
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई दिल्लीमा अस्पताल भ’र्ना, कस्तो छ स्वास्थ्य अबस्था ?
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ज’नता स’माजवादी पार्टीका सं’घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अस्पताल भ’र्ना भएका छन्। दिल्लीस्थित य’कृत एवं पि’त्त वि’ज्ञान सं’स्थानमा बिहान ९ बजेदेखि भर्ना गरिएको प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए। आज दिनभर उनलाई अस्पतालमा राखेर आवश्यक सबै प’रीक्षण गरिने उनले बताए। नेपाल वा’युसेवाको विमानबाट आइतबार स्वा’स्थ्य उपचारका लागि भा’रतको राजधानी नयाँदिल्ली गएका थिए। भट्टराई लामो समयदेखि पे’ट स’म्बन्धी स’मस्याबाट पी’डित छन् ।
उनले लामो समयदेखि काठमाडौंको नि’दान अस्पतालमा प’रीक्षण तथा उपचार ग’राउँदै आएका थिए। उ’पचारका क्रममा चि’कित्सकहरुले न्यु’रो-इ’न्डोक्राइनको ट्यु’मर भएको आ’शंका गरी स’ल्लाह र सि’फारिस गरेकाले उनी त्यसको उपचारका लागि दिल्ली गएका हुन्। भट्टराईले उपचारका लागि भारत जा’नुपरेकोमा आफू ल’ज्जित र दु’खित रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए । उनले ट्वी’टरमा लेखेका छन् ‘नेपाली दू’तावासको अ’तिथि क’क्षमा ब’सेर घो’त्लिॅदै गर्दा आ’फू ल’ज्जित/दु:’खित भए’छु ।
२१औं श’ताब्दीमा श’रीरको कु’नामा प’लाएको ट्यु’मर सामान्य कि घा’तक हो छु’ट्याउन न’सकेर विदेशमा छु ! सा’मान्य ना’गरिकको के होला ?’ दि’ल्लीमा रहँदा भट्टराई नेपाली दूतावासमा ब’सेका छन्। भट्टराईसँगै उनकी प’त्नी हि’सिला य’मी र प्रेस सल्लाहकार वि’श्वदीप पा’ण्डे गएका छन्।